Myanmar IT Resource Forum » Garbage » ကူညီၾကပါဦး
1 ကူညီၾကပါဦး on 10th May 2011, 12:14 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-06-08
ကြန္ပ်ဴတာ က nero တို. ms office တို.တင္ရင္------၀င္းဒိုးက shutdown ျဖစ္သြားတယ္--ဘာျဖစ္လို.လဲ မသိဘူး---------
ဘာ error message လဲမျပဘဲ-----က် သြားတာ---------သိတဲ.ဆရာ မ်ား
2 Re: ကူညီၾကပါဦး on 10th May 2011, 4:30 pm
restart က်တယ္ဆုိတာက..စနစ္ရဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအကုန္လံုးအလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္လို႔ပါ....ဥပမာ...nero မွာဆို...registry value ေတြက...restart ခ်ပါမွ..အသက္၀င္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္.....အဲ့လိုမွ restart ခ်ရတာ..စိတ္မရွည္ဘူးဆိုရင္လည္း....restart ခ်မလားေမးရင္ no ေပါ့...ေနာက္ပီးမွ...ctrl+alt+del နဲ႔ task manager ကိုေခၚပီ.... explorer.exe ကို end process လုပ္....ပီးရင္...new task မွာ....explorer.exe ဆိုပီးျပန္ run လိုက္ရင္...restart ခ်သလိုပါဘဲ...
3 Re: ကူညီၾကပါဦး on 27th May 2011, 7:09 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-05-26
waiyan88 wrote: ကွန်ပျူတာ က nero တို. ms office တို.တင်ရင်------၀င်းဒိုးက shutdown ဖြစ်သွားတယ်--ဘာဖြစ်လို.လဲ မသိဘူး---------
ဘာ error message လဲမပြဘဲ-----ကျ သွားတာ---------သိတဲ.ဆရာ များ
အကို error လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ...အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တာ..ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ......
အသေစိတ်နည်းနည်း သိရရင် အဆင်ပြေလောက်တယ်.
Shutdown မဖြစ်ခင် ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ။ Restart ဖြစ်သွားတာလား ..
တခြား ဂိမ်းတွေ , Program တွေသုံးရင်ရော ဖြစ်လား .....
ဘာစက်သုံးတာလဲ. .Laptop or Desktop ....
နောက်.... နောက်တခါinstall ထပ်ရင်လဲ...တနေရာထဲပဲ မှာပဲ Shutdown ကျ တာလား .....စ သဖြင့်ပေ့ါ..... ...
အဓိက ......ဖြစ်နိုင်တာတော့ Hardisk မှာ .Bad Sector ပေါ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်. .ထင်ကြေး ပြောတာပါ..... CPU overheat ဖြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်....... အဲဒီပြောထားတာတွေကတော့ အများကြီး ။ သွား ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် တော့......
4 Re: ကူညီၾကပါဦး